Computer Technical Notes & Sharing Softwares: December 2008
All Serial Numbers & Crack
၁။ ပထမဆုံး run box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ -start ကနေသွားလည်းရတယ်။ Windows key နဲ့ R တွဲနှိပ်လည်းရပါတယ်။ -run box မှာ gpedit.msc လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ...
တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခြင်ဆေးခွေ နဲ့၊ ခြေဆေး ရည်ဘူး အနံ့များနဲ့ ခြင်ကို နှိမ်နှင်းတာ ထက်စာရင်အများကြီး အကျိုးရှိတဲ့...
ဟက်ကာတစ်ယောက်ယောက် ၀င်ရောက်နေမှု ရှိမရှိ အလွယ်တကူ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းကောင်းတစ်ခု
မိမိကွန်ပျူတာထဲမှာ ထရိုဂျန် (Trojan) ဒါမှမဟုတ် ဟက်ကာတစ်ယောက်ယောက် ၀င်ရောက်နေမှု ရှိမရှိ အလွယ်တကူ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်မ...
Watch Online Free Oscar 2013 Movies (၂၀၁၃ခုနှစ် အော်စကာဆုပေးပွဲ ဆုရဇတ်ကားများ ကြည့်ရန်)
1. Best Picture: “Argo.” http://viooz.eu/movies/13953- argo-2012.html 2. Actor: Daniel Day-Lewis, “Lincoln.” http://viooz.eu/mov...
Viber ကိုသုံးပြီး ဖုန်း free ခေါ်ဆိုမယ် ၊ message free ပို့မယ်
မြန်မာ Mobile App က User များကို Viper ဆော့ဝဲကိုသုံးပြီး အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိရုံနဲ့ ဖုန်း free call ခေါ်လို့ရတဲ့ ၊ Message အခမဲ့ပို့လို့...
Memory card 1GB ကနေ 2GB ပြောင်းမယ်
ကဲ.....ဒီတစ်ခါတော့ တေးသီငှက် ချစ်ပိရိသတ်အတွက် ဆော့ပ်ဝဲလ်တစ်ခုကို တစ်ကယ...
sql injection ကို သုံးဖို့တခြားဘာ tool မှ ထွေထွေထူးထူးမလိုပါဘူး ။ browser တခုရှိနေရင်ပဲ ရပါပြီ ။ sql injection attack ကို စတင်ေ...
Facebook သုံးသူများ သတိပြုရန်
Sophos' Naked Security ကုမ္ပဏီ၏ သတိပေးချက်အရ Facebook မှ ပေးပို့သော အီးမေးလ်အတုအယောင် ဖန်တီးပေးပို့မှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ...
passwordဖြင့်ပိတ်ပြီးEmaiပိုရအောင် Gmail, Email စာတွေဓာတ်ပုံတွေကို ပတ်စဝေါ့နဲ့ပိတ်ထားပြီးတခြားလူကြည့်...
ညောင်ရွက်ကိုသုံးပြီး ဖုန်း Battery က်ိုအားဖြည့်နည်း
သိတဲ့လူတွေလဲသိကြမှာပါ..ကျနော်ကတော့အခုမှသိလာလို့ သိသိချင်းဘဲတင်ပေးလ်ိုက်ပါတယ်..အတူတူ ကလိကြတာပေါ့..ရလဲအမြတ်..မရလဲ ဗဟုသုတပေါ့ဗျာ.....
Learning on Internet
I B D Tutorial Sites
Learning Web Building
Online Converter Links
Burglish to Myanmar
Webs for Download
Free DL Center
Free DL Splace
Webs for Upload
Upload5GB
Siz Able Send
Can't Catch Group
Free Myanmar E-books
Myanmar E-Books Catalogue
Korea Movies - 1
Korea Movies - 2
Chatting with ALICE
Computer @ Online
Fun And Mania Blog
Gtalk Password Recovery
PDF Download Add Ons
Russian Common Verbs
Techno Choices Blog
Web to PDF Converter addon
Softwares for Photo
Easy File Protector 2.8
Edit Photo Peditorinst
PFS Setup En
Photo Shop Portable
Raining Photo NIStudio
Twisted Brush Pro
Easy Data Recovery Professional
Pci Us Smart Recovery
Recovery File Scavenger
SuperWin XP Recovery CD Maker
Acr Myanmar Typing
AV20 Voice Changer
HJSplit 2.4 Portable (ဖိုင်ခွဲ၊ ပြန်ဆက်)
MAGIX Ringtone Make
Makeing Template Artistee
Myanmar Open Office
PDF Grabber Professional
Invite တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါက Blogger သည် ထည့်သွင်းပေးခဲ့သော Email လိပ်စာထံသို့ Activation Link တစ်ခုပါတဲ့ Email တစ်စောင်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အတူ Permission အောက်တွင် Invite ခုပ်လိုက်သော Email လိပ်စာပေါ်လာပါမည်။
အကယ်၍ အကြောင်းတခုခုကြောင့် Invite မလုပ်လိုတော့ပါက Remove တွင် Click နှိပ်ပြီး ဖျက်ထုတ်နိုင်ကြပါတယ်။
Invite လုပ်ခြင်းကို လက်ခံခြင်း (Joinateam Blog)
ယခုဆက်လက်ပြီး Member အဖြစ်ဖိတ်ကြားခံရသူတွေဘက်က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြရမယ့် Activation အပိုင်းကို ဖော်ပြသွားပါမယ်။ Blog မှာ ၀င်ရောက်ရေးသားရန် ဖိတ်ကြားသော Email ထဲသို့ ၀င်လိုက်ပါက Invite လုပ်သော Email message ကိုတွေ့ရပါမယ်။
၄င်း Message ကို ဖွင့်လိုက်ပါက အပြာရောင်စာသားများဖြင့် Activation Link တစ်ုခကိုတွေ့ရပါမယ်။ Member ဖြစ်အောင် Activate လုပ်ဖုိ့ရန် Link ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် www.blogspot.com သို့ရောက်ရှိသွားပြီး Invite လုပ်ခြင်းကို လက်ခံသဘောတူကြောင်း အတည်ပြုပေးရပါမယ်။ Username နေရာတွင် Email Address နှင့် Password နေရာတွင် ၄င်း Email Address နှင့် သက်ဆိုင်သော Password တို့ကို ထည့်ပေးရပါမယ်။
Username နှင့် Password တို့ကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပြိးပါက Accept Invitation တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Team Member ဖြစ်သွားပြီး ၄င်း Blog တွင် ၀င်ရောက် ရေးသော Post တင်နိုင် ကြပါပြီ။
Manage team Member
ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံ၍ Activate လုပ်ပြီး သူတို့သည် မိမိ Blog ရဲ့ Member များဖြစ်လာကြပါပြီ။ အဲဒီ Member ဖြစ်လာသူတွေသည် ပုံမှန Default အားဖြင့် မိမိ၏ Blog မှာ Post တွေကိုသာ ရေးတင်နိုင်ခွင့်ရှိ ကြပါတယ်။ အခြားဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိကြပါဘူး။
Blog ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ မိမိကသာလျှင် Blog အမည်ပြောင်းခြင်း၊ Template ပြောင်းခြင်း၊ Post တွေဖျက်ထုတ်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက အခြေခံသဘောကို ပြော တာပါ။ အကယ်၍ လိုအပ်ပါက Member ထဲမှ ယုံကြည်ရသူတစ်ဦးဦးကို မိမိရဲကလုပ်ပိုင်ခွင့်များအတိုင်း ပေးအပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။
Setting အောက်မှ Permission တွင် Click နှိပ်ပြီး (Setting / Permission) သို့သွားလိုက်ကြရအောင်။ Permission အောက်တွင် ဒီ Blog မှာ ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်သူ Member ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲဆိုတာကို တန်းစီဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ Member တွေထဲကမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်တိုးမြှင့်ပေးလိုသော Member အမည်ဘေးမှ Grant Admin တွင် Click နှိပ်ပါ။ Admin အဆင့်ပေးပို့ရန် အတည်ပြုချက်တောင်းခံသော Box တစ်ခုမြင်ရပါမယ်။ “Grant Admin Privilege” တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ထိုသူသည် Post ရေးသားနိုင်ရုံသက်သက် မဟုတ်တော့ဘဲ Blog အားမိမိကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Poll ဆိုတာက အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပေါ်မှာ လူအများ၏ သဘောထား အမြင်တွေကို သိရှိနိုင်အောင် ကောက်ယူသော စစ်တမ်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရရင် စစ်တမ်း ထုတ်ချင်တဲ့ မေးခွန်း တစ်ခု ဖန်တီးမယ်။ ပြီးရင် သဘောထားအမြင်တွေကို ခြုံငုံမိနိုင်တဲ့ အဖြေလေးတွေပေးထားလိုက်မယ်။ လာရောက်ဖတ်ရူသူတွေက သူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့ အဖြေကို ရွေးချယ်ဖြေကြားသွားခြင်းဖြင့် အများဆန္ဒ ဘယ်လိုရှိနိုင်မယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ်ပေါ့။
Element သစ်တခုကို ထည့်သွင်းချင်တိုင်းမှာ “Addapage element” တွင် Click နှိပ်ကြရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် မိမိ Blog မှာ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်မည့် Element များပါဝင်တဲ့ Pop-up window တစ်ခုပွင့်လာပါ မည်။ အဲဒီအထဲကမှ ဆန္ဒရှိရာ Element ၏ Add to blog တွင် Click နှိပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်ကြပါတယ်။
Pop-up window ထဲက “ Poll ” Section နေရာရှိ Add to blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ “Create Poll” Window ကို မြင်ကြရပါမယ်။
ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီးပြီဆိုရင် Save တွင် Click နှိပ်ရပါမယ်။ Pop-up window ပျောက်သွားပြီး မှုလ (Template/Page element) တွင် Element သစ်တစ်ခု တိုးလာတာကို တွေ့ကြရပါမယ်။ View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်ပါက မိမိထည့်သွင်းခဲ့သော Poll ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ကြရပါမယ်။
Add Link List
မိမိ Blog ကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရူသူတို့အားကောင်းနှိုးရာရာ Website လေးတွေ၊ ဦးတည်ချက်တူလို့ ညွှန်ပြချင်တဲ့ Blog တွေကို Link List အဖြစ်တန်းစီပြီး ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ Element သစ်တခုကို ထည့်သွင်းချင်တိုင်းမှာ “Addapage element” တွင် Click နှိပ်ကြရမယ်။
Pop-up window ထဲက Link List နေရာရှိ Add to blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ “Configure Link List” Window ကိုမြင်ကြရမယ်။
ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီးလျှင် Add Link တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Link တစ်ခုစာရင်းဝင်သွားပါပြီ။ URL နှင့် Name တို့တွင် ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် Link များထပ်ထည့်ပါ။
ထည့်သွင်းလိုတဲ့ Link အရေအတွက် ပြည့်ပြီဆိုရင် Save Changes တွင် Click နှိပ်ပါ။ Pop-up window ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Pop-up window ပျောက်သွားပြီးမှုလ (Template Page element) တွင် Element အသစ်တစ်ခုထပ်တိုးလာပါမည်။
View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်ပါက မိမိထည့်သွင်းခဲ့သော Link List ကို တွေ့ကြရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် HTML Code တွေကို Copy ကူးပြိးသွားပြီ။ နောက်တဆင့် ဆက်ရန်အတွက် www.blogger.com ထဲ Login ၀င်ရောက်ပြီး Page Element သစ်တခုထည့်ရန် ပြင်ဆင်ကြရပါမယ်။ HTML Java Script နေရာရှိ Add to blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Configure window ပွင့်လာပါမယ်။
Title တွင် နာရီနှင့် ပတ်သတ်၍ ပေးလိုသော အမည်ရိုက်ထည့်ပါ။ (ဥပမာ-မြန်မာစံတော်ချိန်) Content နေရာထဲတွင် ညာဘက် Click နှိပ်ပြီး Paste လုပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် www.clocllink.com ကနေကူးလာတဲ့ HTML Code များ ဒီ Content ထဲမှာ ပေါ်လာပါမည်။
Save Changes တွင် Click နှိပ်ပါက စတင် Save လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးပြီဆိုရင် Page Element Added ဆိုပြီးပေါ်လာပါမည်။ View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်ပါက Blog စာမျက်နှာတွင် နာရီကို မြင်ကြရပါမယ်။
Email ဖြင့် Post အသစ်များတင်ခြင်း
Blogger ကို ရွေးချယ်မှုအတွက် ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ထူးခြားသည့် အပိုင်းကတော့ Email ဖြင့် Post လှမ်းတင်နိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် Email ပို့ရိုးပို့စဉ်အတိုင်း ပို့ရုံဖြင့် Blog ထဲမှာ Post တစ်ခုတင်ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုရရင် Email ပို့တဲ့အခါရေးသည့် Subject သည် Post Title ဖြစ်လာမည်။ Email Message တွင်ပါ စာသားတို့သည် Post တွင်းပါစာသားများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကျတာက To နေရာမှာ ထည့်သွင်းပေးပို့ရမယ့် Email Address ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
၄င်း Email လိပ်စာကိုရရှိဖို့ရန် Blogger မှာ Login ၀င်ရောက်ပြိး ဖန်တီး ယူရမယ်။ ပြီးရင် လျှို့ဝှက်ထားရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘယ်သူပဲပို့ပို့ အဲဒီလျှို့ဝှက်လိပ်စာဆီပို့လိုက်ပြီဆိုတာနှင့် Blog ထဲမှ Post တစ်ခုအနေနှင့် တက်လာတော့မှာ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုလိပ်စာကို လုံးဝ လျှို့ဝှက်ထားရပါမယ်။ ပထမ အဆင့်အနေနှင့် လျှို့ဝှက်လိပ်စာ (Secret Email Address) ရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ကြည့်ကြရအောင်။ ပြီးမှ Gmail ဖွင့်ပြီး ၄င်းလျှို့ဝှက် လိပ်စာထံသို့ Email တစ်စောင်ရေးပို့ပြီး Post လှမ်းတင်ပုံကို ဆက်လက် ပြောပြသွားပါမယ်။
1. www.blogger.com ထဲသို့ Login ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် Setting tab အောက်တွင်ရှိသော Email ထဲသို့သွားလိုက်ရအောင်။ ဒီနေရာကို (Setting/Email) Page လို့ခေါ်လိုက်ကျရအောင်။
2. Blog Send Address နေရာတွင် မိမိရဲ့ Email လိပ်စာကိုထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ။ Mail-to-Blog Address နေ၇ာတွင် လျှို့ဝှက်လိပ်စာအတွက် မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ စာလုံးများကို ထည့်ပေးရပါမယ်။ လျှို့ဝှက် Email လိပ်စာသည် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ------@blogger.com လိပ်စာမှ -----ပြထားသော နေရာများသည် ကိုယ်ထည့်ရမည့် အပိုင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ကဆိုခဲ့သလိုပင် လျှို့ဝှက်လိပ်စာဖြစ်ရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် အခြားသူများခန့် မှန်းလို့ မရနိုင်စေမည့် စာလုံးများသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၄-လုံးဖြည့်သွင်း ကြရပါမယ်။ ဥပမာ-ပုံအရ လျှို့ဝှက်စာသည် username@blogger.com ဖြစ်လာပါမည်။
3. Save Setting တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Secretemail Adddress တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ဒါဆိုရင် ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Email မှတဆင့် Post လှမ်းရေးဖို့ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ။ Email ဖွင့်ပြီး Post တစ်ခုလောက်ရေးတင်ပုံကို ကြည့်လိုက်ရအောင်……..
1. To နေရာတွင် လျှို့ဝှက်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။
2. Subject နေရာတွင် ရေးခဲ့သော စာသားများသည် Post title ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
3. Email Message ၏ Body ထဲတွင် ရေးသားသော စာများသည် Post တွင်ပါ စာသားများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရေးလိုသမျှ ရေးပြီးပြီဆိုရင် နောက်မှ စာနောက်ဆုံးမှာ #end ဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာအထိပဲဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ Email Program တွေမှာ ကိုယ်ရေးတာအပြင် “No Virus Found” ဆိုတဲ့ စာသားတွေ၊ ကြော်ငြာတွေအလိုလိုပါသွား တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေမပါအောင် #end ကိုထည့်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စ်ိတ်တိုင်းကျပြီဆိုလျှင် Send တွင် Click နှိပ်ပြီးပို့လိုက်ပါ။ ခဏအကြာ Blog ထဲမှာ Post သစ်တခုတိုးလာပါလိမ့်မယ်။
Blog တို့သည် Website များကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုရရင် Website များမှာကဲ့သို့ Blog တစ်ခုမှာလည်း အခြားမည်သည့် Blog တို့နှင့် မတူနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာ ( URL) တစ်ခုစီရှိကြပါတယ်။ Page တစ်ခုကနေ အခြား Page တစ်ခုကို ကူးပြောင်းကြည့်ရူနိုင်တဲ့ Hyperlink တွေပါရှိကြတယ်။ ဒါက အခြေခံ အကျဆုံး တူညီချက်တွေကို ပြောတာပါ။ သဘောတရားအားဖြင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် Website တို့တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၀င်ရောက်ဖတ်ရူ့သူများအနေနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိပါဘူး။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရူနိုင်ရုံသက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Blog တွင် ပါဝင်ရေးသားချက်များပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ရူသူတို့ ကိုယ်တိုင် ဝေဖန်ဆွေးနွေး Comment ၀င်ရေးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ သိလိုသမျှကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်။
C-Box ဆိုတာက Blog Page အတော်များများမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စကားပြောခန်း (Chat room) လေးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ C-Box ထဲမှာ Post တွင်းပါ အကြောင်းအရာတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ကြသလို Blog ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတွေ အချင်းချင်းလည်း နှစ်သက်ရာ အကြောင်းအရာကို ခေါင်းစဉ်တင် ဆွေးနွေးနိုင်ကြသည်။
သဘောက Blog ပိုင်ရှင်နှင့် ၀င်ရောက်ဖတ်ရူသူတို့အလွယ်တကူ ထိတွေ့ ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ နေရာလေးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Blog မှာလည်း C-Box ထားချင်ရင် အခကြေးငွေကုန်ကျမှုမရှိဘဲ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။
Blog ထဲမှာ C-box ထည့်ခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ၃ပိုင်းခွဲ၍ ဖော်ပြသွားပါမယ်။
1) Create an C-Box Account
2) Configuring C-Box
3) Add to Blog
Create an C-Box Account
C-Box ထံမှ Account တစ်ခု၇ရှိရန် ထုံးစံအတိုင်း ပထမဦးစွာ Registration လုပ်ရမယ်။ ပြီးရင် Email မှတဆင့် Activative လုပ်ကြရပါမယ်။
1. www.Cbox.ws သို့သွားပါ။ ရောက်ပြီဆိုရင် Account သစ်တစ်ခုစဆောက်ရန် Signup တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။
2. Username၊ Password အပါအ၀င် Email Address တို့ကိုဖြည့်ပြီး Register လုပ်ရပါမယ်။ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီးလျှင် Finish တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Registration လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားပြိး မိမိထည့်သွင်းပေးခဲ့သော Email လိပ်စာတွင်းသို့ C-Box မှ Mail တစ်စောင်ပို့ထားပါလိမ့်မယ်။
3. C-Box တွင် Register လုပ်စဉ်အခါတုန်းက ပေးခဲ့သော Email အတွင်းသို့ Login ၀င်လိုက်ပါက C-Box မှပို့ထားသော Message အားတွေ့ရပါမယ်။ ၄င်း Mail Message အားဖွင့်ဖတ်လိုက်ပါ။
4. ပွင့်လာသော Mail Message ထဲတွင် www.cbox.ws သို့ဝင်ရောက်တဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်မည့် Username နှင့် Password တို့ကို တွေ့ရပါမယ်။ လိုအပ်ပါက ကူးယူမှတ်ထားလိုက်ပါ။ ထို့နောက် အပြာ ရောင် Activation Link ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ သီးခြား Window တစ်ခုပွင့်လာပြီး www.cbox.ws သို့ ပြန်ရောက်သွားပါမယ်။
5. Activation လုပ်ရန်အတွက် Username နှင့် Password ကိုဖြည့်ပြီး Login ၀င်ရပါမယ်။ (Username က ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)။ Password ဖြည့်ပြီး Login တွင် click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် www.cbox.ws သို့ Login ၀င်ရောက်သွားပြီး Activaiton လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။
Configuring you C-Box
C-box တွင် Login ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် လိုအပ်သလို Setting အချို့ကို ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါပြီ။ အထူးသဖြင့် C-Box အရွယ်အစား၊ စာလုံးအရောင် အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုမှ နာရီတွေ၊ ပြက္ခဒိန်တွေထည်သလိုပင် HTML Code များအား Copy ကူးယူပြီး မိမိ Blog ထဲသွားထည့်ကြရပါမယ်။
1. C-Box အတွင်းဝင်ရောက်ပြိးပြီဆိုလျှင် မိမိရောက်ရှိနေသော နေရာသည် Admin အောက်မှာ My Account ဆိုတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ (Page ၏ ဘယ်ဘက် Quick Setup၊ Option အစရှိသည်တို့ထဲမှ My Account သည် High Light ဖြစ်နေပါမည်)။ C-Box Options တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။
2. Options ထဲတွင် C-Box ရဲ့ အရွယ်အစားကို လိုသလို မြင်နိုင်ပါတယ်။ မှုလ အရွယ်အစားက 160*380 px ဖြစ်ပါတယ်။
3. အကယ်၍များ 200*400 px လို့များ ပြောင်းလိုက်ရင် C-Box သည် ဘေးဘက်ပိုကျယ်လာမယ်။ အပေါ်အောက် ရှည်လာမယ်ပေါ့။ တစ်ခုခုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အရေးကြီးတာက Save တွင် Click နှိပ်ရပါမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ စာလုံးအရောင်အရွယ်အစားတွေကို ပြောင်းလိုလျှင် Colours & Fonts တွင် Click နှိပ်သွားရောက်ပြီး လိုသလိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တခါ Smiles ထဲမှာဆိုရင် Keyboard ကနေဘယ်သေင်္ကတတွေတွဲရိုက်ပါက C-Box ထဲမှာ ဘယ်လိုပုံ (Gesture) လေးတွေပေါ်မယ်ဆိုတာ မျိုးသွားရောက်လေ့လာ ထားနိုင်ကြပါတယ်။
C-Box အတွင်းရေးသားထားသော Message များအား ဖျက်ထုတ်ခြင်း၊ ဘယ်သူတွေကိုတော့ ၀င်ရောက် ရေးသားခွင့် မပြုဆိုတာမျိုးတွေ ကန့်သတ်လိုပါက Message Blocked user တို့ထဲမှာ လုပ်ဆောင် နိုင်ကြပါတယ်။ ယခုအဆင့်တင် မလိုအပ်သေးပါ။
4. စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် မိမိ Blog တွင် ထည့်သွင်းရန်အတွက် HTML Code များကို Copy ကူးယူရပါမယ်။ Quick setup တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ C-Box အတွက် HTML Code များမြင်ကြရ ပါမယ်။
5. “Copy to Clipboard” တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါက ၄င်း Code များအားလုံးကို Copy ကူးယူပြီးသွားပါပြိ။ တစ်နေရာတွင် Paste (Ctrl+v) လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသော Message ပါသည့် Box ကျလာပါမည်။ OK တွင် နှိပ်ပြိး ပိတ်လိုက်ပါ။
C-Box အတွက် HTML Code တွေ Copy ကူးခဲ့ပြိးလျှင် ရှေ့က နာရီ၊ ပြက္ခဒိန်တို့ ထည့်သလိုပင် Blog Page Element တစ်ခုအဖြစ် Paste လုပ်ပြီးထည့်ကြရုံ ဖြစ်ပါတယ်။
HTML Java Script နေရာရှိ Add to Blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Configure Window ပွင့်လာပါမည်။ Title နေရာတွင် ပေးလိုသော အမည်ထည့်ပါ။ ဥပမာ-မှာချင်တာလေးတွေရှိရင်မှာခဲ့ပါ။
Content ထဲတွင် Cursor ချပြီး (Ctrl+V) တွဲနှိပ်ပါ (သို့) Content နေရာထဲတွင် ညာဘက် Click နှိပ်ပြီး Paste လုပ်လိုက်ပါ။ ကူးလာတဲ့ HTML Code များ ဒီနေရာတွင် ပေါ်လာမည်။
Save Changes တွင် Click နှိပ်ပြီး Save လုပ်လိုက်ပါ။ View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်ပါက Blog စာမျက်နှာတွင် C-Box ကို မြင်ကြရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် Blog တွင်းသို့ (C-Box) လို့ခေါ်တဲ့ စကားပြောခန်း (Chat Room) လေးတစ်ခု ထည့်သွင်းပြီးသွားပါပြီ။
Manage Page Element
မိမိရဲ့ Blog မှာ ထည့်သွင်းထားသည့် Page Element တွေထဲက ဘယ်ဟာတွေကိုတော့ အပေါ်ကထားမယ်။ ဘယ် Element တွေကိုတော့ အောက်မှာထားမယ် အစရှိသဖြင့် လိုသလို နေရာချ လို့ရပါတယ်။
“ဥပမာ-ကဗျာရေးလေ့ရှိပါသလား” လို့ အမည်ပေးထားသည့် “Poll Element” ကို အပေါ်ဆုံးမှာ ထားလိုတယ်ဆိုပါစို့။ Mouse Pointer ကို ထို Poll Element ပေါ်ရွှေ့လိုက်ပါ။ Cursor သည် Drag ဆိုတဲ့ ဖိဆွဲလို့ရတဲ့ မြှားပုံလေးထောင့်လေး ပြောင်းသွားပါမည်။
အဲဒီအချိန်မှာ Mouse ဖြင့် Drag ဆွဲပြီး လိုသည့်နေရာရောက်လျှင် လွှတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ၄င်း Element သည် အပေါ်သို့ ရောက်သွားပါမည်။ စိတ်တိုင်းကျ ရွှေ့ပြီးးလျှင် Save တွင် Click နှိပ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
Edit (or) Delete Page Element
မိမိထည့်သွင်းထားခဲ့သည့် Page Element တွေထဲက အချို့ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့တည်းမဟုတ် မလိုအပ်တော့၍ ဖျက်ထုတ်ခြင်းများကို လိုအပ်သလို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ ပြန်လည် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်လိုသော Page Element ၏ Edit ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Configure Window ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြင်ဆင်လိုသည့် စာသားမျာကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါပြီ။ အကယ်၍ များလုံးဝဖျက်ထုတ်လိုပါက Remove Page Element တွင် နှိပ်ပြီး ဖျက်ထုတ်နိုင်ကြပါတယ်။
Header ဆိုတာဟာ Blog title နှင့် Description အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသော စာသားများရှိရာ နေရာ ဖြစ်သည်။ Header ရှိ Edit တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Configuration Window ပွင့်လာပါမည်။
၄င်း Window ထဲတွင် Blog title နှင့် Description တို့ကို တွေ့ရပါမယ်။ ပြင်လိုက ပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Header ကို ထူးခြားအောင် လုပ်လို့ရတာက နောက်ခံနေရာမှာ မိမိနှစ်သက်ရာ ပုံကို ပြောင်း ထည့်ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Browse တွင် Click နှိပ်ပြီး Header နောက်ခံထားလိုသည့် ပုံဖိုင်လ်ကို ရွေးပေးပါ။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင် Save Changes တွင် Click နှိပ်ပြီး သိမ်းဆည်းလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Blog ကို ပြန်ကြည့်ပါက Header နေရာမှာ ရှေ့ကလို နောက်ခံပလိတ် မဟုတ်တော့ပဲ မိမိရွေးချယ်ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ ပုံနောက်ခံ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Blogger ဖြင့် Blog ရေးရန်ဘာတွေလိုမလဲ
ပုံမှန်အားဖြင့် Blog ရေးချင်တဲ့ Website မှာ Register အရင်လုပ်ရတယ်။ ပြီးမှစရေးလို့ရတယ်။ ဆိုရရင် Multiply မှာရေးချင်ရင် www.multiply.com ကို သွား၊ ထုံးစံအတိုင်း Email လိပ်စာပေးပြီး Registe လုပ်၊ ပြီးရင် စရေးလို့ရပြီ Blogger မှာလည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ထိုနည်းအတိုင်းပါပဲ။
သို့သော် မိမိမှာ Gmail Account တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုရင်တော့ Blogger မှာ Register လုပ်စရာမလိုပဲ တန်းရေးလို့ရတယ်။ သဘောက Blogger သည် Google ကပေးတဲ့ Service Gmail သည်လည်း Google ကပေးတဲ့ Service ဖြစ်သည့်အတွက် Gmail Account ရှိသူတိုင်းကို Google မှာ Register လုပ်ပြီးသားလို့ ယူဆပါသည်။ သည်အတွက်ထပ်မံ၍ Register လုပ်ရန်မလိုပါ။ www.blogger.com သို့သွားပြီး ၀င်ရောက်ရေါ်သားကြရုံ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကတော့ Font ဖြစ်ပါတယ်။ Blog ကို မြန်မာလိုရေးချင်သူတွေအနေနှင့် မိမိသုံးသည့် စက်ထဲမှာ မြန်မာယူနီကုဒ် တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်း Install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ သို့မှသာ Blog ကို မြန်မာလိုရေးသား ဖတ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ Blog တွေကို မြန်မာလို ရေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးအများဆုံး မြန်မာ Unicode Font က Zaw Gyi ပါလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သူ့ကို အခကြေးငွေပေးစရာ မလိုပဲ Free Download ရယူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ Install လုပ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ “Ctrl+Shift” Key တွဲလေး နှိပ်ရုံဖြင့် မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်ကို အလွယ်တကူကူးပြောင်း စာစီနိုင်ခြင်းများ အပါအ၀င် အခြားအားသာချက်များစွာရှိပါသည်။ သည့်အတွက် မြန်မာလိုများ စိတ်ကူးရှိရင် ဇော်ဂျီးကို စမ်းသုံးကြည့်ပါလို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။
Zaw Gyi Unicode Installer ကို http://www.Alpha.com .mm/blogday/index.html မှာသွားရောက် Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Download Now တွင် ဆွဲယူခဲ့သေသာ Installer File ပေါ်တွင် Double Click နှိပ်ဖွင့်ပြီး ပေါ်လာသော ညွှန့်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်လုပ်ပါ။ Install လုပ်သွားလိုက်ပါ။
Install ပြီးသွားရင် Task bar ပေးတွင် Language bar ပေါ်လာပါမည်။ ၄င်း Language bar ထဲတွင် English ဟုပေါ်နေချိန်တွင် စာရိုက်မည်ဆိုပါက အင်္ဂလိပ်လိုစာစီစာရိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလိုရိုက်လိုလျှင် Keyboard မှ “Ctrl+Shift” ကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Language tools ထဲမှာAlpha Zaw Gyi ဟု ပြောင်းသွားပါမည်။ ယခုချိန် စာရိုက်မည်ဆိုပါက မြန်မာလို စာရိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤနည်းဖြင့် “Ctrl+Shift” တွဲနှိပ်၍ မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာ အပြန်အလှန် ပြောင်းလဲ စာစီနိုင်ကြပါတယ်။
Anatomy ofaBlog(Blog တို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ)
Blog title ဆိုတာက စာအုပ်အမည်တို့နှင့် သဘောတရားချင်း ဆင်တူတယ်။ စာအုပ်နာမည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီစာအုပ်သည် တက်ကျမ်းလား၊ ဟာသလား၊ ဘ၀သရုပ်ဖော်လား ဆိုတာကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပါဘဲ Blog title နှင့် Description ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သတင်းအဖြစ်အပျက်တွေကို ဦးစားပေးတဲ့ Blog လား၊ ရသစာတမ်းတွေကို ဦးစားပေးတဲ့ Blog လားဆိုတာကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရူသူများအား သိစေနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
Blog ရဲ့ အသက်သည် Post များဖြစ်ပါတယ်။ Blog ထဲမှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ရေးပြီးတင်သမျှကို Post လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ သဘောက အကြာင်းအရာတစ်ခုခုကို ရေးတင်တိုင်း Blog ထဲမှာ Post တစ်ခုတိုးပါတယ်။ Blog တစ်ခုမှာ Post အရောအတွက် ဘယ်လောက်ပဲ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ ရေးတင်တဲ့ အကြိမ်များရင်များနိုင်သလောက် Post အရေအတွက်များပါလမ့်မယ်။
Blog ဖတ်သူတွေအနေနှင့် Post တွင်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန် ဆွေးနွေးခြင်း၊ သိလိုသမျှ ထပ်ဆင့်မေးမြန်းခြင်းများကို ဒီနေရာကနေတဆင့်သွားပြီး ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ အချို့ Blog တွေမှာ Annonymous User အနေနှင့် မည်သူမဆို ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်ကြပေမယ့် အချို့မှာတော့ Register လုပ်ပြီးမှ ၀င်ရောက် ရေးသားခွင့် ရှိပါတယ်။
Page Element တွေဆိုတာက Webpage တို့ရဲ့ အဆင်တန်ဆာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ကို ညီညွှတ်မျှတအောင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် မိမိ Blog စာမျက်နှာမှာ ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ စာမျက်နှာတွင်ကြည့်ပါ။
Online Blogging Tools
အင်တာနက်ပေါ်မှာ Online blogging tools လို့ခေါ်တဲ့ Blog ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်သော Website တွေများစွာရှိပါတယ်။ အနည်းငယ် ထုတ်နှုတ်ပြရရင် Blogger၊ Blog City၊ Word press၊ Yahoo 360၊ MSN space၊ Six apart၊ Expression engine၊ Love journal၊ Type pad တို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီအထဲကမှ Tools ကတော့ ပိုကောင်းပါတယ် ဆိုတာမျိုးပြောဖို့ရန် ခက်ခဲပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tools တော်တော်များများသည် Blog တစ်ခုဖန်တီးဖို့ရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Post တင်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံဗီဒီယိ၊ သီချင်းခွေတွေကို တင်ခြင်း၊ မိမိ Blog ၏ ဒီဇိုင်းကို နှစ်သက်သလို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ Comment ရေးခြင်း၊ အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။ တနည်းဆိုရရင် အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို အလွယ်တကူ အသုံးးပြုနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားကြပါတယ်။
ဒီတင်ပြချက်ကတော့ Online tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google ၏ Blogger ဖြင့် Blog ရေးပုံများကို ဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Blogger ကို ရွေးချယ်ရခြင်းက အင်တာနက်ပေါ်မှ လူသုံးအများဆုံး Online tools တစ်ခု ဖြစ်ခြင်းကလည်းတစ်ကြောင်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Google မှပေးသော Service တစ်ခုဖြစ်သည့် အတွက် Google ၏ ဟန်ပန်အတိုင်းပင် အမြင်ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူ စေခြင်း အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ယနေ့ခေတ်ပေါ် Browser(IE Mozilla) တို့နှင့် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ် နိုင်ခြင်း အစရှိသော အားသာချက်များကြောင့်လည်း ရွေးချယ်တင်ပြလိုက်ရခြင်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ Blog ရေးသားပုံ အဆင့်ဆင့်တို့ကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် Blog ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် Blog ဖန်တီးရေးသားမှု နယ်ပယ်သည် ကျယ်ပြန့်သည် အလျောက် ယခုလောက်သိခဲ့ကြပြီရုံဖြင့် ပြည့်စုံလုံလောက်ပြီလို့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါတွေက အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေသာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အရေးကြီးတာက ဒီအခြေခံအချက်တွေကို ကျွမ်းကျင်ခဲ့မှသာလျှင် ရှေ့တဆင့် တက်လှမ်းလေ့လာလို့ရမယ်။ အခြားသူတို့၏ Blog များ ဖန်တီးရေးသားပုံတွေကို နမှုနာလေ့လာနိုင်ကြ မယ်ဆိုတာကိုတော့ သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် တို့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် ဘရောက်ဇာရဲ့ ထိပ်မှာရှိတဲ့ လိပ်စာ ဘားမှာ ဘလော်ဂါကွန် ရဲ့လိုဂိုလေး ကိုဒီလို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
ကဲ ဒီနေရာလေး ကို ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုလေး အဖြစ်ပြောင်းချင်သူ များအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ လေး ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်သိပြီးသူများ သိပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပေမယ့် မသိသေးသူများ လုပ်ရမှာ ခက်ခဲနေသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဝေမျှလိုက်တာပါ...။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ် ကဲစလိုက်ကြရအောင်...
ပထမဦးဆုံး ဘလော့ဂ် ရဲ့ Layout ကိုဝင်လိုက်ပါ..
ပြီးရင်တော့ Edit HTML ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါ...
ဒီကုဒ်မှာထည့်ထားတဲ့ လိုဂိုလေး ရဲ့လိပ်စာ အတိုင်းထည့်လိုက် ရင်တော့ ကျွန်တော့် လိုဂိုပုံစံလေး ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံအလံလေး ဟာ လိပ်စာ ဘားမှာ တလူလူ လွင့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
မိမိတို့နှစ်သက်သလို လိုဂိုလေးများ ပုံလေးများ လုပ်ပြီး ဝဘ်ဆိုက် တစ်ခုခုမှာ upload လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ url လိပ်စာကို အပြာရောင်ပြထားတဲ့ နေရာမှာ အစားသွင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိ တို့ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုလေးများ ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ..
Posted by SLIP at 10:05 AM4comments
Labels: Blog လုပ်နည်း အပြည့်အစုံ
I am doing what I should do in order to do what I want to do.
Myanmar Daily Info & General Knowledge
"မြန်မာ" အမည်နာမ ဆင်းသက်လာပုံ - Myanmar History and Names by မီးပြတိုက်
မြန်မာပြည်မှ ဂြိုလ်တုတစ်စင်းလွှတ်တင်နိုင်ရန် Sing Tel ကူညီမည် - မြန်မာ့မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ လုပ်ခွင့်ရမည် ဆိုပါက မြန်မာပြည်မှ ဂြိုလ်တုတစ်စင်း လွှတ်တင်နိုင်ရန် Sing Tel မှ အကူအညီ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်က...
ယနေ့ကျောင်းဆင်း(၈)နှစ်ပြည့်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၁၀)ပါ စစ်တက္ကသိုလ်၊ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၇) ကျောင်းဆင်းများ၏အလှူတော်....နတ်လူသာဓုခေါ်စေသောဝ်.... -
Dendrobium Thein Sein - as I suspected, it's overwhelmingly olive-green, the color of the Burmese tatmadaw i might be prejudiced to think that way. after all, aren't all orchid s...
50 Best Websites 2010 (1)
Adobe Acrobat (PDF)ကို notepad လိုအမြန်ဖွင့်မယ် (1)
Apple vs Microsoft (1)
Auto Run File များလုပ်ခြင်း (1)
Auto Run ပိတ်ထားမယ် (1)
BIOS password ကို Cmos battery မဖြုတ်ဘဲ command line မှ crack လုပ်နည်း (1)
Bit and Byte (1)
Blog လုပ်နည်း အပြည့်အစုံ (6)
Chat in MS-DOS using IP address (1)
command prompt ကနေ drive တွေဖျောက်ခြင်း (1)
Computer - Vocabulary (1)
E-mail လိပ်စာ ထဲက at (1)
Email ကြိုပို့ထားလိုလျှင် (1)
Firefox မှာ အပ်ပြီး youtube မှ Mp4 Dowload လုပ်နည်း (1)
Folder lock ချထားတာကို Password မသိပဲနဲ့ဖောက်ခြင်း (1)
For Folder (5)
Harddisk Partition တွေ ဖွက် ထား မယ် (1)
Laptop ပျက်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ (1)
Microsoft Publisher 2010 (1)
Myanmar Forums (1)
Myanmar Network (1)
PC Mechanicn (1)
Portable Application တွေ ပြုလုပ်ခြင်း (2)
Right-click နှိပ်မရအောင် (1)
Shows all the hardware and software installed (1)
Software မသုံးဘဲ Drive ကို Password ပေးခြင်း (1)
Structured Query Language (2)
Teach Yourself the Best Technology and Repairing PCs (1)
Team Viewer မသုံးပဲ Team Viewer လိုပဲကြည့် ကြည့်ကြရအောင် (1)
ware များ (1)
Website ဆိုတာ (1)
What is Dropbox? (1)
Wi-Fi လွှင့်နည်းများ (1)
Window Registry editor အခြေခံ (1)
Windows7Personalize ပြဿနာ (1)
Windows Explorer Shortcut များ (6)
Windows Password နှင့် အခြား User Password မေ့သွားခဲ့လျှင် (1)
ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်စေချင် (4)
ကွန်ပျူတာ သမိုင်း (1)
ကွန်ပျူတာဖြင့် “ခြင်” နှိမ်နှင်းနည်း (1)
ဗန်း စကားများ (1)
မိမိပို့ လိုက်တဲ့ Email ကို လက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ် (1)
မြန်မာ စာအုပ်များ (1)
သီချင်းခွေတွင်ထည့်သွင်းထားသော ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း (1)
အင်တာနက်မှ ရှာဖွေနည်း (1)
အသုံးဝင်သော ဆိုဒ်များ (1)
အိုင်တီ သမားတစ်ယောက် ရှိသင့်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားများ (1)
Adobe Acrobat Pro_ 9
AVG Free En 90v
Portable Browser 8 In 1
Magic CD & DVD Burner
PDF File Printer
vso Convert X to DVD 4
Win AVI Video Converter
Windows Myanmar Translator Beta Version
Softwares for Download
MajorShare Rapidshare Downloader
RapidShare Killer AiO
Zawgyi for Windows7- 64 bit
All into One FLASH Mixer
Flash Video Exporter
Portable SWF Decompiler Magic
GPS Caddie Sync
Password Recovery all in one.Magic.v6.1.1.97
Softwares for Model
Memory Stick Format ချလို့မရရင် SP27608
Softwares For System
CleanMyPC Registry Cleaner 4.30
Trojan Killer v2.0.6.1
Virus Remover v2.3.0320 Portable
Win Utilities 9.72
Softwares for Video Editing
TMPGEnc XPress Retail
My Digital Activator
7Loader By Orbit30 and Hazar
Windows Vista Activators
MS Windows Vista Developer Activation
Vista Activation 3.0 Beta
Copyright 2010 - Computer Technical Notes & Sharing Softwares